Sida loo helo barnaamijyada tababarka shaqada | USAHello The | USAHello
Raadi barnaamijyada tababarka shaqo oo aad u hesho xirfado shaqo
Ma u baahan tahay si aad u ogaato barnaamijyada tababarka shaqada kugu dhow? Ma rabtaa in aad in uu barto xirfado shaqo cusub? Baro oo ku saabsan siyaabaha kala duwan ee aad u tababaran kartaa shaqo.
Ka hor inta aadan bilaabin wax barnaamijyo tababar shaqo, laga yaabaa in aad u baahan tahay xirfadaha shaqada aasaasiga ah. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad rabto in aad si aad u barato wax akhriska iyo qorista, isticmaasho computer ah, ama buuxi codsiga shaqada.
Halkee laga heli karaa barnaamijyada
maktabadaha, dugsiga, iyo xarumaha bulshada inta badan waxay leeyihiin barnaamijyo baro xirfadaha aasaasiga ah. Sidaas ma niyadsamida hay'ad samafal ah oo lagu magacaabo. Waxaa laga yaabaa inaad ku arkay dukaamada niyad samida meesha aad ka iibsan kartaa dhar la isticmaalay iyo alaabta guriga. Niyadsamida isticmaalaa lacagta dukaamada si ay u caawiyaan dadka shaqada u diyaar garoobaan oo shaqo ku heli lahayd. Waxay bixiyaan fasalo kale ee aasaasiga ah Ingiriisi iyo. Waxay daryeelka ilmaha ku caawin kara inta aad ka baran. Meelaha qaarkood, Niyadsamida waxay leedahay barnaamijyo tababar shaqo gaar ah, sida xirfadaha lagu shaqeeyo ee bangiyada iyo cusbitaalada. Raadi aad niyadsamida maxaliga ah tababarka xirfadaha iyo taageerada.
Isticmaal xarunta shaqada ee maxaliga ah
bulshada kastaa waxa uu leeyahay xarunta shaqada ah si ay u caawiyaan dadka shaqo u helaan. Xarumaha Job American jira adeegyo lacag la'aan ah oo ka socda dawladda Maraykanka. xarumaha shaqada The isticmaalaan magaca "CareerOneStop" online, laakiin waxa ay sidoo kale laga yaabaa in aad gobolka ama magaalada leeyihiin magac degaanka. Tusaale ahaan, xarumaha shaqada Texas waxaa la yiraahdaa "qaatuhu." xarumaha shaqada Minnesota waxaa la yiraahdaa "CareerForce."
xarumaha shaqada ayaa kaa caawin kara siyaabo badan, oo ay ku jiraan idin siinayo tababar ama helitaanka barnaamijyada tababarka shaqada. xarumaha shaqada qaar waxay leeyihiin barnaamijyo tababar shaqo gaar ah oo qaxootiga iyo muhaajiriinta! Aad u ogaato xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Job Corps waa barnaamijka dawladda ah oo bixiya barnaamijyo tababar waxbarasho lacag la'aan ah iyo shaqo si ay ragga dhallinyarada ah iyo dumarka 16 in 24 sano jir ah. Tababarka waxaa ka mid ah shaqooyinka caafimaadka sida CNA, kaaliyaha caafimaadka ilkaha, daawo-, ku xigeenka maamulka caafimaadka, duwaha qaybta caafimaadka, iyo kalkaalisada. badan oo ku saabsan Job Corps Baro.
Tag Kulliyadaha bulshada
Kuleejooyinka bulshada waa dugsi loogu talagalay dadka waaweyn ee da'da ah oo dhan in ay bixiyaan koorsooyin badan oo kala duwan. Waxaad wax ka barashada Ingiriisiga ee fasalada fiidkii iyo ilaa qaadashada koorsada laba sano injineerinka samayn karaa. Kuleejooyinka bulshada leeyihiin koorsooyinka tababarka badan oo shaqo. Fiiga waxbaridda yihiin aad uga yar tahay jaamacadaha iyo kulliyadaha gaarka loo leeyahay. Raadi Kulliyadda bulshada.
Noqo arday ah
arday An waa qof u barto xirfadaha, halka uu isagu ama iyadu ka shaqeeyaa. Tababartayaasha tababar shaqada, oo waxay inta badan leeyihiin qaar ka mid ah ardeyda fasalka, aad. Taasaa ah jidka wanaagsan haddii aad daneyneyso in shaqo gaar ah - tusaale ahaan diyaarinta baabuurta ama koronto - laakiin aadan haysan xirfadaha weli. US Department of Labor leeyahay liiska barashada.
Liiska in ay u badan tahay oo kaliya daboolayaa dhowr ka mid ah fursadaha tababarka ee. Ma jiraan ganacsiyo aad u dhow, kuwaas oo had iyo jeer raadinaya shaqaalaha? Waxaad waydiin kartaa haddii ay noqon lahayd doonaya inay ku qaataan sida arday ah oo aad u tababaraan. Inta badan, shaqaale la isku halayn karo oo dadaal badan yahay muhiim ah in shaqo-badan xirfadaha wax, maxaa yeelay, waxay ku bari karaan xirfadaha.
In magaalooyinka waaweyn, iyo xitaa in bulshooyinka yar qaar ka mid ah, waxaad ka heli doontaa ururada caawiya dadka cusub u tababaraan shaqada. Tani waxay noqon kartaa wakaaladda dejinta ama machadka caalamiga ah. Waxaa laga yaabaa in mashruuc in tababaraya dadka cusub ee shaqooyinka qaarkood.
Halkan waxaa ku qoran meelaha qaarkood in tababar ku cusub for shaqada:
Boston: The Machadka Caalamiga ah ee New England waxay bixisaa laba barnaamij tababar shaqo meelaha aadka loo rabo: barnaamij tababar hoteelada iyo a shahaado adeegyada daryeelka caafimaadka.
Central Texas: IDEA Capital waxay ka caawisaa dadka waaweyn tababar in shaqooyinka aadka loo rabo.
Colorado: The Bean Project Haweenka shaqeeya dadka ku nool wax soo saarka cuntada qalalan intii ay helaan xirfado shaqo iyo nolol.
Minnesota: Communidades United Latinas in Service (TILMAAMAHA) waxay bixisaa lacag la'aan ah, 9-koorsooyinka mustaqbalkiisa todobaadka ee dadka waaweyn ee caafimaadka, dhismaha iyo macaamiisha beeraha adeegga
Sidoo kale in Minnesota: The Partnership Hmong American waxay bixisaa barnaamijyo tababar shaqo si loo baro xirfadaha mihnad baahida sare.
Maine: The Project New Beeraha Sustainable American dadka ka caawiya noqon beeralayda.
Utah: ka Spice Jikada Kobcinta Tababar qaxootiga in ay ganacsi gaari xamuul ah cuntada.
gobolka Washington: Project Iiddii ubaraan qaxootiga iyo muhaajiriinta in ay galaan warshadaha cuntada adeegga.
Ka sii fikir - tababar ku qaadato shaqo ee technology
Sida laga soo xigtay Refugee Project sireed, waxaa jira in ka badan nus milyan oo shaqooyinka bannaan Kombuyuutarada ee USA! dhowr magaalo waxay leeyihiin barnaamijyo koodh computer oo kaliya loogu talagalay dadka cusub.
Haddii aad hore u leedahay ama aad rabto in ay bartaan xirfadaha kombiyuutarka, fekero tababarka ee computer iyo internet ammaanka, sidoo kale loo yaqaan internetka. Waxaa baahida sare ee dadka qaba xirfadaha internetka, iyo waxa ay noqon doontaa shaqo wanaagsan mustaqbalka. Waad awoodaa akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan shaqooyinka technology.
Waxaa laga yaabaa in aad hore u leedahay xirfad shaqo, sida ka dusiyeen ama tuubooyinka, macalinka ama xanaanada? Shaqooyin badan ee USA, aad u baahan tahay shahaadada si ay u muujiyaan aad u tababaran, si aad u samayn kartaa shaqo ee Maraykanka.
Si aad u hesho certified, laga yaabaa inaad u baahan doontaa in gudubto imtixaanka. Waxaa laga yaabaa in aad u baahan doontaa tababar qaar ka mid ah ka hor inta aanad qaadan imtixaanka.
CareerOneStop Certification Finder caawin kara inaad hesho shahaadada aad u baahan tahay.
Upwardly Global caawiya xirfadlayaasha cusub aad dib-u-shahaado ee dalka Mareykanka.
Halkee si ay u bartaan xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah
Raadi tababar shaqo ee FindHello
Refuge Coffee la beddelo nolosheena